Kuratidza zvinyorwa neelebheri panorma
Jablonec nad Jizerou (Jablonetz an der Iser muchiGerman) inowanikwa mudunhu reSemily muLiberec Region. Kune vanogara vanenge 1 vagari. Sezvo Jablonec nad Nisou iri padyo, padanho rekufamba kwemakiromita makumi maviri nemasere, iyo Czech Jablonec kana Jabloneček dzimwe nguva yaishandiswa. Iri zita rekuti Jablonec nad Jizerou rave richishandiswa zviri pamutemo neaya maseru kubvira 600.
Mukukamuraniswa kwenhaka pakati paIshe veWaldstein, Hynek weGylemnicze (Jilemnice nhare) uye Henyka weSstiepanicz (Štěpanice), musi waChikumi 22, 1492, Hynek weWaldtsstein naGylemnicze vakawana, pakati pezvimwe zvinhu, pfuma pabasa rake. musha weGablonecz nematare evatungamiriri, varimi, nemubhadharo uye musha wakaparara weWogtiessycze (Vojtěšice).
Franz Joseph Ini ndafunga kusimudzira Jablonec kuenda kuguta retaundi munaFebruary 14, 1896, iyo yaiwanzo kutaurwa munaFebruary 24, 1896, uye mukana, kwete kubva munaJune 7, 1896, asi kubva Chikunguru 7, 1896, yakapa Jablonec jasi remaoko. weSt Procopius muMitra